Umaki: ukuthengiswa kwensimu | Martech Zone
Umaki: ukuthengiswa kwensimu
Lwesibili, Disemba 10, 2019 Lwesibili, Disemba 10, 2019 U-Austin Rolling
Njengoba umhlaba uya ngokuya ungabi nobuntu ngokucwiliswa kobuchwepheshe - imithombo yezokuxhumana, ukuxoxa ngevidiyo, njll. Ithuba seliziveze ngendlela yangempela. Umqondo owake weza ngokwemvelo, enembile futhi waba khona kahle kakhulu njengokucabanga ngemuva kwesikhathi ubuyiselwe esimweni esingesihle, esibiza kakhulu sokudla isikhathi. Ukuya ngokomzimba phambi kwabantu ofuna ukwakha ubudlelwano nabo. Kubonakala sengathi umbono osobala osobala, kepha iqiniso